एन्ड्रोइडका लागि टिनी प्लानेट ब्लास्ट एपीके डाउनलोड [पजल गेम] - लुसो गेमर
एन्ड्रोइडका लागि टिनी प्लानेट ब्लास्ट एपीके डाउनलोड गर्नुहोस् [पजल गेम]
नोभेम्बर 24, 2021 by जोन स्मिथ
अन्तरिक्ष संसार सधैं अन्वेषण गर्न एक रोमाञ्चक स्थान भएको छ। किनभने बाह्य अन्तरिक्ष ग्रह र स्रोतहरूले धनी छ। यद्यपि बाह्य अन्तरिक्षमा पुग्न वर्षौं लाग्यो। त्यसैले तपाईं लुकेका स्रोतहरू अन्वेषण गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि टिनी प्लानेट ब्लास्ट स्थापना गर्नुहोस्।
वास्तवमा, गेमिङ एप एक ठूलो पजल मानिन्छ जहाँ विभिन्न विशाल ग्रहहरू अवस्थित छन्। यद्यपि ती ठूला विशाल ढुङ्गाहरू तोड्न धेरै शक्ति र रकेट चाहिन्छ। आवश्यकताहरू र भारी गोला बारूदलाई विचार गर्दै।
विकासकर्ताहरूले यी विभिन्न हतियारहरू प्रत्यारोपण गर्छन्। सुरुमा, खेल भित्र प्रस्ताव गरिएका हतियारहरू सीमित र कम शक्तिशाली छन्। यद्यपि, शक्ति र सीपहरू अपग्रेड प्रदर्शन सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसोभए तपाईं अनन्त स्रोतहरू कमाउन तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि यहाँबाट नवीनतम एपीके डाउनलोड गर्नुहोस्।
Tiny Planet Blast Apk के हो
Tiny Planet Blast Android UBoxStudio द्वारा संरचित अनलाइन एन्ड्रोइड पजल गेमिङ एप हो। गेमप्ले भित्र, अन्वेषण अन्तरिक्षको लागि रकेट प्रक्षेपण गर्न ठूलो योजना सुरु गरिएको थियो। किनभने ग्रहमा पहुँचयोग्य स्रोतहरू सीमित छन्।
स्रोत र खनिजको ठूलो खपतका कारण। अहिले पृथ्वीले स्रोतको खोजीमा समस्या भोग्न थालेको छ । एउटै विकल्प बाँकी छ बाह्य अन्तरिक्ष अन्वेषण। किनभने त्यहाँ धेरै ग्रहहरू पहुँचयोग्य छन्।
यो खेल्नुहोस् र कमाउनुहोस् खेल बाहिर पठाइएको सानो रकेट संग सुरु हुन्छ। यद्यपि विभिन्न हतियारहरू अन्य शक्तिशाली क्याननबलहरू पहुँचयोग्य छन्। ती क्याननबलहरू ठूलो क्षतिको कारण प्रयोग गर्नुहोस्। अझै ती बलहरू पहुँच गर्न रत्न र अन्य कमाई चाहिन्छ।
किनभने पर्याप्त हीरा बिना, गेमरहरूले शक्तिशाली हतियारहरू अनलक गर्न सक्दैनन्। हतियार र अन्य शक्तिशाली कौशल साइड खण्ड मा प्रदर्शित छन्। केवल निम्न पहुँचयोग्य विकल्पहरू मध्ये कुनै पनि चयन गर्नुहोस् र ठूलो क्षति निम्त्याउनुहोस्।
APK को विवरण
नाम सानो ग्रह विस्फोट
आकार 60 एमबी
प्याकेज नाम com.uboxst.tpblast
आवश्यक एन्ड्रोइड ..6.0.। र प्लस
श्रेणी खेल - पहेली
रकेट हतियारले जहिले पनि समयमै फायर गर्छ र फायरपावर बढाउँछ। खेलाडीहरूलाई आफ्नो खेल कौशल सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ। पावर कौशल अपग्रेड बिना। समयमै ग्रहहरूलाई क्षति पुर्‍याउन र नष्ट गर्न गाह्रो भयो।
खेल खेल्दा खेलाडीहरूले अनुभव गर्न सक्ने एउटा समस्या छ। र त्यो समस्या तेस्रो पक्ष विज्ञापनहरू हो जुन स्क्रिनमा समयमै देखा पर्न सक्छ। याद गर्नुहोस् विज्ञापनहरू हेर्दा हतियार प्रभावहरू सहित विभिन्न प्रो स्रोतहरू अनलक गर्न मद्दत गर्दछ।
खेलको अनुभव र आनन्द बाहेक। विशेषज्ञहरूले चिठ्ठाहरूमा सहभागिता र विभिन्न इनाम बाकसहरू अन्वेषण मार्फत कमाई विकल्पहरू पनि एकीकृत गर्छन्। मानौं यदि कुनै गेमर राम्रो स्रोत फेला पार्न सफल हुन्छ।
त्यसपछि त्यो कमाएको खजाना मुख्य खातामा जम्मा हुनेछ। पछि गेमरले PayPal र अन्य बैंकिङ स्थानान्तरणहरू मार्फत सजिलैसँग महँगो उपहार वास्तविक नगदमा कारोबार गर्न सक्छन्। जो अन्य खेलाडीहरूसँग खेल खेल्न इच्छुक छन्।
साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्न र मल्टिप्लेयर गेमप्लेको मजा लिन पनि सक्छ। त्यसैले तपाईलाई अवसरहरू सहित सबै मुख्य सुविधाहरू मनपर्छ। त्यसपछि टिनी प्लानेट ब्लास्ट डाउनलोडको नवीनतम संस्करण डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्। त्यो एक क्लिक विकल्पको साथ यहाँबाट पहुँच गर्न पहुँचयोग्य छ।
एपीके को मुख्य सुविधाहरु
एपीके फाईल डाउनलोड गर्न को लागी नि: शुल्क छ।
खेल स्थापना गर्नाले अन्वेषण र आनन्द दुवै प्रदान गर्दछ।
बाह्य अन्तरिक्ष जाँदा अन्य ग्रहहरूको बारेमा ज्ञान बढाउन मद्दत गर्नेछ।
ती ग्रहहरूलाई नष्ट गर्दा अद्वितीय स्रोतहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
लुकेका खजानाहरू सहित जुन नि:शुल्क र वास्तविक रूपमा रिडिम योग्य छन्।
कुनै पञ्जीकरण आवश्यक छैन।
उन्नत सदस्यताहरू कहिल्यै आवश्यक पर्दैन।
यसले तेस्रो-पक्ष विज्ञापनहरू समर्थन गर्दछ।
तर पर्दामा विरलै देखा पर्नेछ।
खेल इन्टरफेस सरल र मोबाइल को अनुकूल छ।
विज्ञापनहरू हेर्दा हतियार र क्याननबलहरू अनलक गर्न मद्दत गर्नेछ।
टिनी प्लानेट ब्लास्ट गेम कसरी डाउनलोड गर्ने
हाल, गेमिङ एप प्ले स्टोरबाट पहुँच गर्न सकिने छ। यद्यपि, गेमरहरूले अनुकूलता समस्याहरूको कारणले ती फाइलहरू पहुँच गर्न समस्याहरू अनुभव गर्न सक्छन्। यद्यपि, खेलाडीको अनुरोध र मागलाई विचार गर्दै, हामी यहाँ मौलिक एपीके फाइलहरू पनि प्रस्ताव गर्दछौं।
गेमरहरूलाई सही उत्पादनको साथ मनोरञ्जन गरिनेछ भनेर सुनिश्चित गर्न। हामी विभिन्न एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा Apk स्थापना गर्छौं। जबसम्म हामी एप्लिकेसनको सहज सञ्चालनको बारेमा निश्चित छैनौं। Apk फाइल डाउनलोड सेक्सन भित्र प्रस्ताव गरिने छैन।
के यो एपीके स्थापना गर्न सुरक्षित छ?
हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेको गेमिङ एप मौलिक छ। र डाउनलोड सेक्सन भित्रको प्रस्ताव गर्नु अघि, हामी विभिन्न एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा Apk स्थापना गर्छौं। खेल स्थापना गरेपछि, हामीले भित्र कुनै समस्या पाएनौं।
यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा, हामीले पहिले नै प्रकाशित र धेरै बिभिन्न खेल र कमाउने खेलहरू साझा गरेका छौं। जुन वास्तविक हो र रमाइलो गर्न र कमाउने उत्तम मौका प्रदान गर्न सक्छ। ती खेलहरू अन्वेषण गर्न लिङ्कहरू पछ्याउनु पर्छ जुन हो IVANS एपीके र Rummy Nabob Apk.
तसर्थ तपाईं एक अनलाइन अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ, जहाँ एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो खाली समयमा कमाउन र मजा लिन सक्छन्। त्यसपछि यस सन्दर्भमा, हामी ती एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई Tiny Planet Blast Apk डाउनलोड र स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं। त्यो एक क्लिक विकल्पको साथ पहुँच गर्न निःशुल्क छ।
लिङ्क डाउनलोड गर्नुहोस्
विभाग पहेली, खेल ट्याग खेल्नुहोस् र कमाउनुहोस्, सानो ग्रह विस्फोट, टिनी प्लानेट ब्लास्ट एन्ड्रोइड, टिनी प्लानेट ब्लास्ट एपीके, सानो ग्रह ब्लास्ट डाउनलोड मेल अन्वेषण
युरोपको ट्रकहरू3एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [खेल]
एन्ड्रोइडका लागि स्टेशन ब्लूस्ट एपीके डाउनलोड [चलचित्रहरू]
एक टिप्पणी छोड जवाफ रद्द
2021 २०XNUMX LusoGamer